Xaqiijinta da'da qaawan? - Aasaaska Abaalmarinta
Dhamaan abaalmarinta abaalmarinta aasaasidda blogyada
Galmada & Porno
Tababbarka Xirfadleyda Daryeel Caafimaad - taariikho cusub oo ku saabsan Scotland waxaa lagu shaacin doonaa bisha Luulyo.
Isu-dheellitirka iyo isu-dheellitirka
Xasuusta & Barashada
Porn & Debut Early Sexual
Xaqiijinta Da'da ee UK
Sexting in England, Wales iyo Northern Ireland
Caawimaadda Ku-Daawashada Cunuga
Blog Xaqiijinta da'da qaawan?
Xaqiijinta da'da qaawan?
adminaccount888 21st September 2019 News Latest
Xaqiijinta da'da ee marin u helka qaawan ayaa ah cillad ilaalinta ilmaha halkii la isku dayi lahaa in la boobo qof kasta oo madadaalo ah ama joojiya sahaminta galmada.
Si fudud ayaa looga helaa carruurta oo keliya. Waxaa jira cadaymo balaaran oo cilmi baaris ah oo sababaya iyo xiriir la leh oo iftiiminaya tiro badan oo caafimaadka maskaxda iyo halista jireed ka soo qaaditaan hore iyo daba-dheeraada heerka heerarka sare ee maaddada galmada. Tallaabada xaqiijinta da'da ayaa ka caawin karta carruurta intiisa badan, gaar ahaan kuwa da'da yar, si looga fogaado soo-gaadhista waxyaabaha galmada ee dadka waaweyn iyo dhibaatooyinka la xidhiidha.
Riwaayadan gaaban ee “Gabe” waxay kugu qaadeysaa qaar ka mid ah caafimaadka iyo sababaha bulshada ee xaqiijinta da'da da 'yarta qaawan ay u horseedeyso wanaag iyo mustaqbal xiriir caafimaad.
Ka dhigista internetka mid amaan ah
Fiidiyowga waxaa marti ku ah degel cusub, www.ageverification.org.uk, oo taageerta dadaallada ay wadaan dhowr dowladood si internet looga dhigo meel aamin ah carruurta. Khubarada caafimaadka iyo dowladaha waxay aqoonsanyihiin in maskaxda maskaxdu ay si gaar ah ugu nugul yihiin balwadda iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaadka maskaxda. Arrimahan oo kale badanaa waxay soo baxaan inta lagu jiro qaan-gaarka. Sidaas darteed, iibinta aalkolada, nikotiinta iyo khamaarka dhammaantood way ku xadidan yihiin dadka waaweyn.
Caddaynta loogu talagalay dabeecadda khasabka ah iyo qabatinka ee qaar ka mid ah wax soo saarka internetka ee maanta waxay keentay in Ururka Caafimaadka Adduunku uu qaato cilado cusub oo ku saabsan dib-u-habeyntiisii ​​kow iyo tobnaad ee dib-u-eegista Cudurrada Caalamiga ah (ICD-11). Kuwaas waxaa ka mid ah dabeecad galmo khasab ah, ciyaar iyo khamaar. Waxaa si aad ah u kordhay dhawaanahan tirada macaamiisha doonaya daaweynta daaweynta ciladaha qasabka ah ee galmada. Boqolkiiba sideetan ee kuwa raadinaya kaalmo waxay ka cabanayaan adeegsiga xun-xun ee xakamaynta.
Daraasadaha ayaa muujinaya in caruur badan ay durba u isticmaalaan qaawan internetka internetka maalin kasta iyo usbuuc kasta. Xayiraadda deg degga ah ee helitaanka fududa ah ee qaawan ee qaawan ee internetka waxay sababi kartaa in qaarkood ay la kulmaan astaamaha ka bixitaanka (madax xanuun, xanaaq, walwal iwm) iyo xanaaq badan. In kasta oo qaarkood raadinayaan dariiqooyin ku saabsan xaddidaadda xaqiijinta da'da, gaar ahaan carruurta waaweyn, kuwa kale ayaa laga yaabaa inay ku jahwareeraan oo ka wareeraan xaaladda cusub. Ujeeddooyinka mid ka mid ah fiidiyowgaan ayaa ah in loo sharraxo sababta sharcigani uu muhiim ugu ahaa. Rajadu waxay tahay inay heli doonaan ilo xog ogaal ah oo aqoonta galmada oo ay bartaan inay naftooda ku madaddalaan qaabab aan halis gelin doonin dhibaatooyinka jidheed iyo maskaxeed waqti ka dib.
Haddii adiga, ama qof aad taqaanid, ay si ba'an u saamaysay guuldarradda helitaanka fudud ee qaawan ee internetka fadlan arag agabkan loogu talagalay caawimo badan oo lacag la'aana, taageero fac iyo talo ah:
Bogaggayaga internetka Goynta Porn
Maskaxdaada ee Porn ™
Mashruuca runta ah ee qaawan
Fiidiyowga xaqiijinta da'da wuxuu la imanayaa shatiga CC BY-NC-ND 4.0. Tani waxay u oggolaaneysaa qof kasta inuu si xor ah ugu qaybiyo fiidiyowga warbaahinta bulshada ama Websaydhka.
Audiobook maqli karo
Telefoon + 44 (0) 131 447 5401 44 Mobile + 0 (7506) 475 204 XNUMX
© 2016 HESHIISKA HORUMARINTA: DHAMMAAN XUQUUQDA WAXAY LAHAYD
Mu'asasada Abaal-marinta, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR: Scottish Charitable Incorporated Organisation SC044948
Nooji oo guji "geli" si aad u raadisid